Tarisa pane zvakaita Huozhou kupisa chirongwa
Chitete uye lug Type BV
Moto Kurwisa BV
Prirubnički leptir ventil
Eccentric shavishavi vharuvhu
Hard chisimbiso gedhi vharafu
Soft chisimbiso gedhi vharafu
Shanxi Huozhou kudziyisa nzvimbo Huozhou "zvinhu zvitatu uye imwe indasitiri" yekudziisa yekuchengetedza chirongwa, Senge vharuvhu yakapinda muchirongwa shanduko muna Chikumi 2020, umo "zvinhu zvitatu uye imwe indasitiri" zvinoreva mvura, magetsi, kudziyisa uye kuchengetedza pfuma mukati. nzvimbo yemhuri yevashandi veemabhizinesi ehurumende (kusanganisira epakati mabhizinesi nemakambani ehurumende). "Zvitatu zvekushandisa uye imwe indasitiri" kupatsanurwa uye kupihwa kunoreva basa reku manejimendi rine simba mutemo uye hunyanzvi, kufukidza kwakakura uye kushanda kwakaomarara zvakanyanya uko mabhizinesi ehurumende (kusanganisira emakambani nemasangano ekutsvagisa sainzi) anopatsanura mvura, magetsi uye kudziyisa maneja wepfuma. inoshanda munzvimbo yemhuri kubva kumabhizinesi ehurumende uye kuendesa iwo kumagariro ehunyanzvi ehutungamiriri.
Kunge mavharuvhu eHuozhou yekupisa chirongwa chinonyanya kupa mavharuvhu ,mavharuvhu emagetsi uye mavhavhosi ebhora.
Wedzera mufananidzo (1)
Kubatanidza nzira yemagetsi shavishavi vharuvhu
Kunyanya: flange mhando uye chitete mhando; Simbiso mamiriro emagetsi shavishavi vharuvhu kunyanya inosanganisira rabha chisimbiso uye simbi chisimbiso. Chiedza chemagetsi chinoratidza panguva yekuvhura nekuvhara kwevhavhavhavhavha yemagetsi. Chigadzirwa chacho chinogona kushandiswa sevhavha yekumira uye yekugadzirisa vharuvhu yepombi system. Nemaoko ekuvhura nekuvhara chishandiso, kana magetsi atemwa, inogona kushandiswa nemaoko pasina kukanganisa iko kushanda.
Kushanda musimboti wemagetsi shavishavi vharuvhu
Simba rinoshanda rinowanzo sanganisira: AC220V, AC380V, nezvimwewo Input chiratidzo: 4 ~ 20mA, 0 ~ 10V uye zvimwe zvisina kusimba zvazvino. Mushure mekuchinjika emagetsi actuator uye vharuvhu tsvimbo zvakabatana uye debugged; Shandisa simba remagetsi sesimba rekutyaira kutyaira ndiro yemavharufuru ye 0 ~ 90 ° kutenderera kutenderera. Gamuchira iyo 4 ~ 20mA chiratidzo kubva kuindasitiri otomatiki kudzora system kunyatso kudzora vharuvhu switching degree, kuti uwane kuzadzikiswa uye kudzora kwakasiyana kwekuda paramita senge kuyerera, tembiricha uye kumanikidza.
Hunhu hwehunyanzvi hwesimbi yakasungwa vharuvhu
1. Iyo vharuvhu mamiriro echimiro akasunganidzwa zvakasarudzika pasina kubuda kwekunze.
2.Chigaro chevhavha chinoumbwa ne PTFE yekuisa chisimbiso mhete uye chitubu, iyo ine simba rakasimba kuchinjika kumanikidza uye tembiricha shanduko uye haizogadzi chero kuvuza mukati mechikamu chekushandisa.
3. Iyo anti leakage chimiro chevhavha yevhavha inoumbwa neiyo PTFE yega yekuisa chisimbiso gasket uye imwe O-mhete pazasi pevhavha yevhavha, maO-mhete maviri uye maviri PTFE magasketi kuve nechokwadi kuti hapana leakage.
4. Izvo zvinhu zvemuviri wevhavha zvakaenzana neiyo pombi, uye hakuzove nekusaenzana kushushikana, extrusion uye deformation nekuda kwekudengenyeka kwenyika uye mota dzinopfuura nepasi.
5. Muviri wevhavha wakareruka uye uri nyore kudziya.
6. Iyo vharuvhu yakavigwa yakananga inogona kuvigwa yakananga pasi pevhu pasina kuvaka hombe vharuvhu tsime. Tsime diki chete risina kudzika rinofanira kuiswa pasi, iro rinochengetedza zvakanyanya mutengo wekuvaka uye nguva yeinjiniya.
7. Kureba kwemuviri wevharuvhu uye kukwirira kwesimbi yevhavha zvinogona kugadziridzwa zvinoenderana nekuvaka uye dhizaini yepombi.
8. Kugadzirwa kwemachira kwenzvimbo iyi kwakanyatsojeka, mashandiro acho akareruka, uye hapana kupindira kwakashata.
10. Pane nzira mbiri dzekubatanidza: Welding uye flange.
11.Kushandisa modhi: mubato, giya (yakamira / yakatwasuka)
12. Pasi pemamiriro ekushanda kwemazuva ose uye kushandiswa kwevhavha, iyo nguva yevimbiso ndeye makore makumi maviri.
Maumbirwo e welded bhora vharafu
1. Iyo vharuvhu inotora kabhoni simbi isina musimbi simbi pombi yakatsindirwa yakakosha welded bhora vharuvhu.
2. Iko vharuvhu inogadzirwa neAISI303 simbi isina chinhu uye muviri wevhavha wakagadzirwa neAISI304 simbi isina simbi. Inoitwa nekupedzisa kukuya uye ine yakanakisa yekuisa chisimbiso kuita uye ngura kuramba.
Kuiswa chisimbiso kunotora kabhoni yakasimbiswa PTFE yakanamatira yekuisa chisimbiso mhete, uye kumanikidza kwakashata kuri padenderedzwa pamusoro, kuitira kuti kuiswa chisimbiso kune zvakanakira zero leakage uye hupenyu hwakareba hwebasa.
4.Kubatanidza modhi yevhavha: Welding, shinda, flange, nezvimwe kune vashandisi kusarudza. Transmission modhi: mubato, turbine, pneumatic, magetsi uye zvimwe zvifambiso zvivakwa zvinogamuchirwa, uye switch yacho inochinja uye yakajeka.
5. Iyo vharuvhu ine zvakanakira komputa dhizaini, kurema uremu, nyore kupisa kwemafuta uye nyore kuisa. Iyi vharafu inowanzoiswa yakatwasuka.
6. Iyo yakavharidzirwa welded bhora vharuvhu inogadzirwa nekutora yekunze tekinoroji uye kusanganisa nemamiriro chaiwo muChina. Inoitwa muChina pachinzvimbo chekutenga kunze kuzadza gadziriro yemumba. Inoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzekureba-pombi senge gasi rechisikigo, peturu, kudziyisa, indasitiri yemakemikari uye yekupisa simba pombi network.
Saiti mufananidzo (1)
Saiti mufananidzo (2)
"Zvinhu zvitatu uye imwe indasitiri" inobatsira kudzikisa mutoro wemabhizinesi ehurumende nekutarisa kuvandudzwa kwemabhizimusi makuru. Izvo zvakare zvinobatsira mukubatanidzwa kwezve zviwanikwa, shanduko uye kukwidziridzwa kwezvivakwa uye nekuvandudza nzvimbo yekugara yevashandi. Senge vharuvhu inogara inonamatira kune bhizinesi uzivi hwe "kutendeka, hunyanzvi, kubatana uye kuhwina-kuhwina", inoumba pachayo nehunhu hwechigadzirwa uye kugutsikana kwevatengi, uye inopfuura pachayo nekutsvaga kusingazungunuke nekusimudzira kwakasimba.
Nguva yekutumira: Jan-13-2022
Kugadziriswa kwenguva refu uye kusangana kunoda ...
Nheyo yevharuvhu yekuisa chisimbiso vharafu vacuum p...
Zita revharuvhu uye modhi yevharuvhu...
Kusimba bvunzo uye yekuisa chisimbiso bvunzo nzira ye ...
Zuva nezuva kugadzirisa vharafu huru tekinoroji pe...